Sidee loo furaa xisaab bangi oo Faransiis ah? Dooro bangiga Faransiiska
Posted by Tranquillus | Jul 9, 2018 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Markaad u guureyso Faransiiska, furitaanka xisaab bangi inta badan waa tallaabo lagama maarmaan ah. Runtii macquul maahan in la noolaado la'aanteed: waa muhiim in lacag la helo, lagala baxo ama bixin alaabooyinka iyo adeegyada ... Halkan waxaa ku yaala qaar ka mid ah talooyin si aad u furatid xisaab bangi oo aad dooran kartid bangi.
Baanka Faransiiska ee ajaanibta
Haddii aad u soo guurto Faransiis si aad wax uga barato ama u shaqeyso, furashada xisaab bangi waa muhiim. Talaabooyinka waxay qaadan karaan wakhti, laakiin waa kuwo aad u faa'iido leh kuwa doonaya inay joogaan dhowr bilood ama sannado ciqaabta Faransiiska.
Ajnabiyaasha ku nool Faransiiska waa inay sidoo kale furaan xisaab bangi. Kuwo badan ayaa doorta inay u gudbaan bangiga shisheeye sababtoo ah kharashka hooseeya. Dhab ahaan, haysashada koontadaada ka furan waddankaaga waxay noqon kartaa go'aan qaali ah oo aan caawineyn.
Dhererka joogista ee Faransiisku waa go'aan adag oo ah doorashada iyo bangiga. Dadka ajnabigaa uma gudbi doonaan bangiyada islaamka ama manfacyada haddii ay qorsheynayaan in ay joogaan wax ka badan ama in ka yar hal sano oo ah ciidda Faransiiska.
Shuruudaha furitaanka xisaab bangi oo Faransiis ah
Kuwa doonaya inay furaan xisaab bangi sida muwaadiniin ajnabi ah ayaa looga baahan yahay inay soo bandhigaan aqoonsi sawir leh. Sidaa darteed waa baasaboor. Dukumentiyada kale ee xaq u yeelashada aqoonsiga codsadaha ayaa laga codsan karaa. Tani waxay dhacdaa gaar ahaan marka dambe ee aaney noqon karin ama aaney jir ahaan u tagin hay'ad (bangiyada internetka, tusaale ahaan). Qofku waa inuu da 'yahay waana inaan laga mamnuucin.
Cadeyn (qiil u sameynta cinwaanka degenaanshaha Faransiiska) sidoo kale waa la codsan doonaa. Dukumiintiyada qaarkood ee caddaynaya xaaladdiisa maaliyadeed sida heshiiska shaqada ama caddeynta dakhliga sidoo kale waa la filan karaa. Bangiyada Faransiisku marar dhif ah ayay u oggolaadaan xad-dhaafka Akoonnada bangiyada.
Furo xisaab bangi muddo ka badan hal sano
Baananku maanta wuu noqon karaa dhaqameed, sidaas awgeed jir ahaan, ama si buuxda u tirtiray sida bangiyada internetka. Dalabkoodu waa kala duwan yahay waana in mar walba la barbardhigaa.
Bangiyada dhaqameed ee dhaqanka
Muwaadiniinta ajnabiga ah, ugu fududaa badanaa waxay tahay inay raadsadaan talada bangi dhaqameed dhaqameed, gaar ahaan haddii aysan buuxin shuruudaha laga filayo bangiyada internetka. Dadka doonaya inay furaan xisaab bangi waa in ay ku noolaadaan Faransiiska, oo kaliya ma ahan inay u jiraan dalxiis.
Baanka waaweyn ee ku yaala Faransiiska sida Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel ama HSBC waa bangiyada oo dhan laga yaabo inay ka jawaabaan muwaadiniin ajnabi ah. Xaqiiqada sahlan ee tooska ah ee u socda hay'adda leh kaarka aqoonsiga iyo sidoo kale caddaynta aqoonsiga iyo dakhliga ayaa ku filan inay furaan xisaab bangi.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato bangiyada internetka waa in ay inta badan u baahan yihiin macaamiisha si ay u yeeshaan koonto bangi oo laga helo bangiga Faransiiska. Tani waxay u oggolaaneysaa inay xaqiijiyaan aqoonsiga qofka heysta oo ka ilaaliya khayaanada. Qof kasta oo doonaya inuu furo xisaab bangiga waa in uu hore u ahaan jiray bangiga Faransiiska. Haddii macaamilka uusan lahayn xisaab, waa inuu marka hore u jeedaa bangiga jireed ee Faransiis si uu u furo marka hore. Waxa uu xor u ahaan doonaa inuu dalbado bangiga internetka si uu u bedelo.
Dadka ajnabiga ah ee ku nool Faransiiska inay shaqeeyaan ama sii wadaan waxbarashadooda ayaa sidaas darteed awood u leh inay bangiyada Faransiisku ku soo rogaan internetka. Waxay u fiican yihiin muwaadiniinta ajnabiga ah tan iyo markii ay jaban yihiin. Badankood waxay bixiyaan dalabyo bilaash ah waxayna aqbalaan macaamiisha dhammaan muwaadiniinta illaa inta ay caddayn karaan degenaanshahooda Faransiiska.
Bangiyada internetka badanaa waxay leeyihiin shuruudo yar, in kastoo qaarkood ay ka dhib badan yihiin kuwa kale. Badanaa, macmiilku waa inuu noqdaa da 'sharci ah, ku noolaado Faransiiska oo haysto dukumiintiyada taageeraya ee lagama maarmaanka ah (aqoonsiga, degaanka iyo dakhliga) Bangiyadan internetka ayaa ah: Fortuneo, ING Direct, Monabanq, BforBank, Hello Bank, Axa Banque, Boursorama…
Furo xisaab bangi muddo ka yar hal sano
Xaaladdani waxay inta badan ku saabsan tahay ardayda iyo Erasmus ee u yimaada Faransiiska dhawr bilood oo keliya. Sidaa darteed muwaadiniinta ajnabigaa waxay doonayaan bangi Faransiis ah si ay u furaan xisaab iyo ujuurooyinka khidmadda bangiga (ka fogaanaya xafiisyada kala-guurka ee dalalka dibadda). Dhab ahaan, ardaydaas, guddiyada lacag bixinta iyo ka bixinta ayaa aad u sarreeya oo ay u baahan yihiin inay furaan xisaab bangi oo ku yaala Faransiiska.
Bangiyada internetka ma bixiyaan xalka loogu talagalay muwaadiniintaas. Bangiyada dhaqameed waxay weli yihiin xalka ugu fiican ee furitaanka xisaab bangi marka muddada joogitaanka ay ka yaryihiin hal sano.
Furi akoonka bangiga ee Faransiiska inta aad ku nooshahay dibedda
Ajnabiyaasha aan ku noolayn Faransiiska waxay u baahnaan karaan in ay qaataan xisaab bangi oo Faransiis ah. Bangiyada internetka ma bixin karaan nooca dalabka. Bangiyada dhaqameed ee dhaqameed badan ayaa sidoo kale diidaya inay furaan xisaabaadkaas. Xalado yar ayaa weli taagan.
Midka hore waa in loo weecdo bangi dhaqameed loogu talagalay ajaanibta. Qaarkood waxay aqbalaan macaamiisha aan daganayn Faransiiska. Khadka tooska ah, mid kaliya ayaa u oggolaanaya waana HSBC. Waxay sidoo kale aadi karaan laan waxayna la xiriiri karaan Société Générale ama BNP Paribas. Caisse d'Épargne iyo Crédit Mutuel sidoo kale waa loo dhowaan karaa.
Ugu dambeyntiina, xalka ugu dambeeya waxaa heli kara dadka shisheeyaha ah ee deggan: waa bangiga N26. Waa bangi Jarmal ah oo ku fidsan dalal dhowr ah. Si aad isugu qorto, waa inaad degtaa mid ka mid ah waddamada soo socda: Faransiiska, Jarmalka, Ireland, Austria, Spain, Talyaaniga, Belgium, Portugal, Finland, Netherlands, Latvia, Luxembourg, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Estonia iyo Greece . Hadday tahay Jarmal RIB, sharciga wax ku oolka ah ee takoorka baananka ee Yurub wuxuu ku waajibinayaa hay'adaha Faransiiska inay aqbalaan. Beddelkaas ayaa markaa caddayn kara inuu yahay mid xiiso leh xaalado badan.
Furitaanka akoonka bangiga ee Faransiiska ayaa u muuqda mid adag. Si kastaba ha ahaatee, tababarkani wuxuu u eg yahay in la fududeeyo sanadaha soo socda, gaar ahaan ajaanibta. Bankiyada Faransiiska waxaa waajib ku ah inay ogaadaan macaamiishooda. Waxay isku dayayaan inay siiyaan xalal fudud si ay u furaan xisaabtooda ajnabigaa.
Talooyin lagu furayo xisaab bangi oo Faransiis ah Agoosto 19th, 2018Tranquillus
socdaSheekada Weelearn: Muuqaalka-Baro